Madagasikara fisandratana : Anio no lanonana lehibe eny Iavoloha -
AccueilRaharaham-pirenenaMadagasikara fisandratana : Anio no lanonana lehibe eny Iavoloha
Tanteraka ny fanamby napetraka amin’ ny hametrahana ireo fotodrafitrasa fototra ho an’ ny firenena, izay ahafahana mampandroso ho amin’ ny tsara kokoa. Ireo asa lehibe sy goavana izay hiankinan’ny fiainam-bahoaka ireo no nanompanan’ny filoham-pirenena ny heriny nandritra izay efa-taona nitondrany an’i Madagasikara, taorian’ ny krizy lavareny izay niainan’ny firenena. Sarotra ny fanarenana saingy tanteraka ny fanamby izay napetraka, dia ny fototry ny fampandrosoana izany. inona moa izany atao hoe fotodrafitrasa fototra izany, fa ireo fitaovana rehetra izay ahafahan’ny rehetra miainga sy hiankinan’ny tsirairay amin’ ny asa izay tanterahiny. Io fototra io izay tsy voatery ho fotodrafitrasa ihany, fa eo ny lalàna, ny fifanarahana ara-piaraha-miasa, ny fifanakalozana amin’ ny any ivelany. Anisan’ny fototra izao, izay efa napetraky ny Filoham-pirenena ohatra ny fanarenana indray ny Bas-Mangoky, fanitarana andiany faharoa ny faha-20 ny volana jona tao Tanambao, kaominina ambanivohitr’i Tanandava , izay toho-drano mahatondraka 5 000 ha hatramin’ ny 10 000 ha, izay ahafahana mahazo vokatra hatrany amin’ ny 44 000 taonina. Toraka izany ihany koa ny lakandrano mitondra rano mirefy hatrany amin’ ny 60 kilometatra izay tsy niasa efa an-taonany maro tao Amparafaravola , izay nosokafan’ny fitondram-panjakana indray. Momba izay tetikasa fototra mikasika ny fambolem-bary izay ihany, dia eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ ny firenena Vietnamianina amin’ ny resaka fanondranana vary. Tsy hohadinoina ny teto an-toerana dia ny fanandramana ny voly vary hybride, izay tsapa sy nahitam-bokany izany, ary ho hita mandritra ny hetsika izay hotontosaina anio eny Iavoloha.
Mikasika ireo fotodrafitrasa fototra kosa indray izay anisan’ny tanteraka tao anatin’izay taona efatra izay, dia eo ny fiaraha-miasa amin’ ny japoney amin’ ny fanitarana ny seranan-tsambon’ i Toamasina, izay ahafahana manitatra ity seranana amin’ny fifanakalozana ara-barotra voalohany eto Madagasikara ity. Tsy hohadinoina noho izany ny fotodrafitrasa fototra eo amin’ izay fifanakalozana sy ny fototra ekonomika izany, ny mahakasika ihany koa ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny any Nosy, izany hoe miara-dalana amin’ ity tetikasa ity ny fijerena ny lafin’ny fizahan-tany. Raha eo ny vokatra, tsy azo hohadinoina ihany koa ny asa vita mikasika ny fifanakalozana dia ny tsena izany, izay tombontsoa lehibe ihany koa ny nahazoan’i Moramanga ny tsena goavana indrindra sy manaraka ny fenitra izay vokatry ny fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana amin’ny sehatra tsy miankina. Io tsena io izay mahazaka mpivarotra hatrany amin’ ny 1 200, ka notokanan’ny filoham-pirenena ny 23 novambra 2017. Tsy mijanona eto an-toerana ihany anefa ny fanarenana ny fototra fa misy hifandraisany betsaka amin’ ny any ivelany, dia eo ny fihaonana amin’ ireo mpandraharaha maro toa ny tany Italia, Sina ary ny conference des bailleurs tany Paris, izay nahazoana ny vola mitentina 6,4 miliara Dolara ampiasaina mandritra ny efa-taona. Mikasika ny lalana indray dia teo ny fiaraha-miasa amin’ ny banky eoropeanina ho an’ ny famatsiam-bola sy ny vondrona eoropeanina ihany koa izay nahafahana nanamboatra indray ohatra ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’i Taolagnaro sy Ihosy. Tsaroana moa fa anisan’ny seranan-tsambo goavana ihany koa ny ao taolagnaro izay manana ny seranan-tsambon’ i Ehoala, ka ahazoana tombony betsaka ny fahazoana izany.
Noho izany ireo sombiny amin’ ny fotodrafitrasa vita nandritra izay efa-taona izay, dia ho tazana sy ho marihina eny Iavoloha avokoa anio, hanotrona izany ihany koa ireo mpitondra sy olo-manan-kaja eto amin’ny firenena. Marihina fa hivantana amin’ ny TVM sy ny RNM ny lanonana ahafahan’ny rehetra mahita ny zava-misy mivantana eny an-toerana. Hiara-dalana amin’ ity hetsika eny Iavoloha ity ihany koa ny hizaran’ny Filoham-pirenena ny vina ekonomika, izay mbola ho tombontsoan’ny firenena hatrany.
Raha toa ka tamin’ny Fitondrana Tetezamita no tena nahitana sy niainan’ny firenena tao anatin’ny gaboraraka tanteraka, miverina indray izany amin’izao fotoana hatramin’ny nitsanganan’ny governemanta vaovao na governemanta Tetezamita, izay tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Porofon’izany, miverina ...Tohiny